Clọ ọrụ Pet Pet - China Pet Crate Manufacturers, Suppliers
Otutu di iche-iche Door mpịachi Metal Dog onu
Ihe Have hụla na nkịta gị na-ehi ụra mgbe niile ma na-atụrụ ndụ n'okpuru tebụl ma ọ bụ n'akụkụ nkuku? Ngwongwo anu ulo a bu ezigbo ihe iji me ka anu ulo gi nwekwuo obi iru ala. A na-eji ihe eji eme ihe eji ere ahia na nke kachasị elu. Ihe mkpuchi ndị ahụ nwere ọtụtụ ọnụ ụzọ na-agbachi ngwa ngwa site na mpempe slide-bolt, ya na mkpuchi uwe ojii na-adịgide adịgide. Settọlite, ịpịpụtagide ngwa ngwa ma meghee oghe; ọ dịghị ngwaọrụ achọrọ. Onye ọ bụla crate atụmatụ a ...
Foldable n'èzí anụmanụ oké ọrụ nkịta Pita crate mpịachi xxl nkịta onu na ụzọ ụzọ abụọ
N'ihe mpịachi Dog onu Dog onu dị mma maka anụ ụlọ niile, ọ na-wuru na elu àgwà sturdy waya ewu na nwa ntụ ntụ ntekwasa imecha. Ọ na-eme ka igbe igbe a dị ogologo oge ọ bụ ezie na ọ kachasị maka iji eme ụlọ, nwee ike ijikwa oke ihu igwe. Nkọwapụta Product Name Folding Dog Cage Dog Kennel Ihe Metal, Welded Steel Usage Nnukwu maka ụmụ anụmanụ, dị ka nkịta, ewu na ọkụkọ Typedị Ngwongwo Ndị Ahụ, Ndị na-ebu ya na Kenlọ Mgbape 18lọ 18 ", 24", 30 ", 42", ...
Ugboro abụọ Door Metal inogide ịkpakọba Pet Crate
Ihe Double-Door Metal Foldable Large Heavy Duty Pet Crate bụ mgbanwe imewe, ọ na-eme ka onu dị mfe iji melite na ala. A na-eji waya waya siri ike ma na-adịgide adịgide, mkpuchi uzuzu ojii na-eme ka ọ maa mma. Ihe nwere ike iwepu aka na-eme ka ọ dị mfe ibugharị, a na-etinye ya na tray plastic iji mee ka ụlọ anụ ụlọ gị dị ọcha. Nkọwapụta Product Name ịkpakọba Dog onu Dog kennel Ihe Metal, Welded Steel ojiji Great maka ụmụ anụmanụ, dị ka nkịta, ewu na ọkụkọ Pdị P ...
Ahaziri 42 ”48” nnukwu Pita ulo nkita abụọ ụzọ ụzọ anụmanụ onu ígwè waya nkịta crate
Ihe Double-Door Metal Foldable Large Heavy Duty Pet Crate imewe na-emepụta ebe dị mma maka anụ ụlọ gị mgbe ị na-anọghị wee na-enye nkịta mmuo gị nke nkịta ”. Ọ bụ mgbanwe imewe, ọ na-eme onu iji melite ma wedata. A na-eji waya waya siri ike ma na-adịgide adịgide, mkpuchi uzuzu ojii na-eme ka ọ maa mma. Enwere ike ịwepụ ya aka na-eme ka ọ dị mfe ibugharị, a na-akwadebe ya na tray plastic iji mee ka ụlọ anụ ụlọ gị dị ọcha. Nkọwapụta Aha Aha Foldi ...
Commercial Modern ahaziri Size Foldable Waya Extra Large Dog ulo nkita N'èzí Pet onu maka ire
Njirimara -Safe, gburugburu gburugburu na nchebe lash na-eme ka anụ ụlọ dị mma. -Easy iji, folda ewepụghị maka adaba nchekwa, mfe melite. (Enweghị ngwaọrụ dị mkpa) - N'ime na mpụga, waya na-adị larịị na-eguzogide nchara. -Ọ na-mere nke siri ike na inogide ígwè waya ntupu, nwa ntụ ntụ mkpuchi na-eme ka ọ mara mma anya. -Detachable ahụ na-eme ka ọ dị mfe ibu, ọ kwadebere ya na tray plastic iji mee ka ụlọ anụ ụlọ gị dị ọcha. Nkọwapụta Product Name ịkpakọba Dog onu Dog ulo nkpa Ihe Metal, welded Steel ...